တရုတ်တစ်ခုတည်းဝက်အူ extruder ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |Jiahao
JHD extruder အမျိုးအစားအားလုံးကို အဓိကအားဖြင့် PVC၊ PE၊ PP၊ PS၊ ABS၊ PA၊ PMMA၊ PET စသည်တို့ကို ပလပ်စတစ်ပစ္စည်း extrusion တွင်အသုံးပြုသည်။သင့်လျော်သော မှိုနှင့် ရေအောက်ပိုင်း စက်ကိရိယာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ extruder သည် ပလပ်စတစ်စာရွက်၊ ဖလင်၊ ပရိုဖိုင်၊ ပိုက်စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder ကို pelletizing field တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
JHD တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder သည် အမြင်၊ လျှပ်စစ်စနစ်၊ ခိုင်ခံ့သောဘောင်ဖြင့် ဒီဇိုင်းအသစ်မွမ်းမံထားသော JHD Single screw extruder ဖြစ်သည် .၎င်းသည် ပိုမိုထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Customerized soulution သည် အမျိုးမျိုးသော ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် မတူညီသော application များအတွက် အမြဲတမ်းရနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder ကို အပူပေးစည်အတွင်း လှည့်နေသော Archimedean ဝက်အူဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ လွယ်ကူသောကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ မြင့်မားသောအပြောင်းအလဲနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်သောကြောင့်၎င်းကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ရင့်ကျက်မှုအရှိဆုံးနည်းပညာနှင့် အသုံးအများဆုံး extruder အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်၊ တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder သည် damping screw block၊ exhaust screw၊ slotted screw barrel၊ pin barrel၊ building block structure နှင့် အခြားသော မတူညီသော structural အမျိုးအစားများကဲ့သို့သော မူလအခြေခံ ခရုပတ်ပုံစံမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder ကနေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးကြောင့်၊ ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပလပ်စတစ်မှုတ်ပုံသွင်းခြင်းရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တွင် အဓိကစက်ပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
1. ပိုက် extrusion: PP-R ပိုက်၊ PE ဓာတ်ငွေ့ပိုက်၊ PEX ချိတ်ဆက်ထားသောပိုက်၊ အလူမီနီယမ်ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ပိုက်၊ ABS ပိုက်၊ PVC ပိုက်၊ HDPE ဆီလီကွန်ပိုက်နှင့် coextrusion ပေါင်းစပ်ပိုက် အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်လျော်သည်။
2. ပန်းကန်နှင့်စာရွက် extrusion: PVC, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, PS, PP, PC နှင့်အခြားပရိုဖိုင်းများနှင့်ပန်းကန်များ၏ extrusion အတွက်သင့်လျော်သည်။ဝါယာကြိုး၊ လှံတံ စသည်တို့ကဲ့သို့ ပလတ်စတစ် ထုတ်ယူခြင်း အမျိုးအစားများ။
3. ပရိုဖိုင်၏ Extrusion- extruder ၏အရှိန်ကို ချိန်ညှိပြီး PVC၊ polyolefin နှင့် အခြားသော ပလတ်စတစ်ပလတ်စတစ်ပရိုဖိုင်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် extrusion screw ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲပါ။မွမ်းမံထားသော granulation- အမျိုးမျိုးသော ပလတ်စတစ်များကို ရောစပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် အားကောင်းစေခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder ၏အင်္ဂါရပ်များ:
·မြင့်မားသောအရည်အသွေးကိုအခြေခံ၍ မြင့်မားသောအရှိန်နှင့်အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော Extrusion ။
·အပူချိန်နိမ့်ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်း၏ ဒီဇိုင်းအယူအဆသည် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်ယူမှုကို သေချာစေသည်။
·အဆင့်နှစ်ဆင့်လုံး ဒီဇိုင်း၊ ပလပ်စတစ်ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အားကောင်းစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာ ထုတ်ယူမှုကို သေချာစေသည်။
·အထူးအတားအဆီးနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောစပ်ထားသော ဒီဇိုင်းသည် ပစ္စည်းများ၏ ရောစပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစေသည်။
·မြင့်မားသော torque output၊ အလွန်ကြီးမားသောတွန်းအားများ။
·ဂီယာများနှင့် ရှပ်များကို ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော အလွိုင်းသံမဏိ၊ ကာဘူရီနှင့် မြေပြင်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
·မြင့်မားသော မာကျောမှု၊ မြင့်မားသော အပြီးသတ်မှု၊ အလွန်နိမ့်သော ဆူညံသံ။
·PLC ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှုသည် ပင်မနှင့် အရန်စက်များကြား ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည် လူသား-စက်မျက်နှာပြင်ကို စောင့်ကြည့်ရန် လွယ်ကူသည်၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စက်အခြေအနေကို နားလည်ရန် လွယ်ကူသည်။
·ထိန်းချုပ်မုဒ် (အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ) ကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
·ပစ္စည်းသည် 38CrMoAl / nitriding ကုသမှုဖြစ်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
·တင်းကျပ်သော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှု၊ လေအေးနှင့် ရေအေးအအေးတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
·ပြီးပြည့်စုံသော ရေအေးပေးစက်ဖြင့် ထူးခြားသော ဝင်ပေါက်ဒီဇိုင်း။
·ဝက်အူမျက်နှာပြင်ပါသော ဝက်အူဗူးသည် အရှိန်မြင့်၍ အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော ထုတ်ယူမှုအတွက် အာမခံချက်ပေးသည့် နို့တိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder အဓိကလက္ခဏာများ:
အဆင့်မြင့်ကွန်ပြူတာ module ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အလုံးစုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေပါသည်။
အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စွာရရှိစေပါသည်။
အားကောင်းမောင်းသန်သောစနစ်သည် တာရှည်ခံမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူမှုကို အာမခံပါသည်။
အတင်းအကြပ် ရေအေးနှင့် အစာကျွေးသည့် လက်စွပ်ဒီဇိုင်းသည် တည်ငြိမ်သော ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေသည်။
ပစ္စည်းကို ညင်သာစွာ ရောမွှေပါ။
chroma နှင့် prefabricated အရောအနှောထုတ်လုပ်မှု၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများပင်
မော်ဒယ် JHD45 JHD60 JHD75 JHD90 JHD100 JHD120 JHD150
မော်တာ ပါဝါ (KW) ၇.၅-၄၅ ၂၂-၉၀ ၃၇-၁၃၂ ၄၅-၁၈၅ ၅၅-၂၈၀ ၇၅-၃၁၅ ၉၀-၃၅၅
ဝက်အူ dia.(mm) 45 60 75 90 ၁၀၀ ၁၂၀ ၁၅၀
L/D အချိုး ၂၅-၃၃ ၂၅-၃၃ ၂၅-၃၅ ၂၅-၃၅ ၂၅-၃၅ ၂၅-၃၅ ၂၅-၃၅
ပလတ်စတစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ PVC၊ PE၊ PP၊ PS၊ ABS၊ PA၊ PMMA၊ PET စသည်တို့
Extrusion အထွက် အမျိုးမျိုးသော ပလပ်စတစ်နှင့် တပ်ဆင်ထားသော မော်တာအလိုက် အမျိုးမျိုး
ယခင်- အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ပလတ်စတစ်ပရိုဖိုင် Extruder စက် - တစ်ခုတည်းသောဝက်အူ extruder - Jiahao
နောက်တစ်ခု: အမြွှာ conical extruder
Double Screw ပလပ်စတစ် Extruder
Mini Screw Extruder စက်
Screw Extruder စက်
Twin Screw Extruder စက်